DAAWO:- Mahad Cawad: Soomaali waxaa ka dhaxeeya calanka iyo Xamar inta kale waa la kala leeyahay | Wardoon
Home Somali News DAAWO:- Mahad Cawad: Soomaali waxaa ka dhaxeeya calanka iyo Xamar inta kale...
DAAWO:- Mahad Cawad: Soomaali waxaa ka dhaxeeya calanka iyo Xamar inta kale waa la kala leeyahay
Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka Soomaaliya, Mahad Cawad ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay tahay magaalo Soomaali oo dhan ka dhaxeysa, hase yeeshee magaalooyinka kale ee dalka ay kala leeyihiin qabiilo.
“Soomaaliyey aan runta isu sheegno, Soomaali waxaa ka dhaxeeya kaliya calanka bulugga ah iyo Xamar, inta kale waxaa kala leh qoysas” ayuu yiri Mahad Cawad oo ka hadlay kulan lagu qabtay hotel Royal ee magaalada Muqdisho.
“Lama kala sheegan karo Xamar iyo calanka, waxay muujinayaan ficil midow, waxa kaliya ee lagu midoobay waa labadaas” ayuu yiri Mahad Cawad, oo ay u sacaba tumeen qaar ka mid ah dadkii dhageysanayey.
Mahad Cawad ayaa sheegay in Muqdisho ay muujisay inaysan u kala duwaneyn qofka ka yimaada Baay ama Bakool ama Sanaad” ayuu sii raaciyey Mahad Cawad.
Waxa uu sidoo kale sheegay in dhammaan Soomaalida oo idil ay isugu yimaadaan Muqdisho ay astaan u tahay in Soomaali isku soo noqotay, oo laga soo bogsanayo kala qob-qobkii.
Previous articleDAAWO:-Somaliland oo qiratay in DF ka xoogtay maamulka hawada Soomaaliya
Next articleDarawal gaari Ambalaas ah ku qaaday Bulkeeti oo la ganaaxay +SAWIRRO
DAAWO:-Galmudug oo Puntland kala wareygtay gaadiid dagaal oo dekeda Bosaaso uga...
DAAWO:-Xijaar waa gangsters leader